Mpanamboatra flange-tendany tsara indrindra ary orinasa | Puyang
Weld flange flange (WN flange) dia manana vozona afaka mamindra ny fihenjanana amin'ny fantsona, mba hampihenana ny tsindry mivory ao amin'ny flange ambany. Izy io dia mifanaraka amin'ny fantsona miasa amin'ny hafanana avo na ambany ary mahazaka tsindry ambony. Manokana ho an'ny fantsona na valves raha lehibe kokoa noho ny 2.5 Mpa ny PN.
Fampiharana sy endri-javatra
Flange vozona no ampiasaina matetika amin'ny fantsom-pifandraisana antonony, fantsom-pifandraisana avo lenta, ny ankamaroan'ny flange weld amin'ny tendany dia antsoina koa hoe flange nipple.
1. Karazan-fitaovana inona ny akora vokatra?
Stainless vy sy aliminioma
2. Inona avy ireo karazana azonao omena?
Welding vozona Flange
Flange lava hatoka lava
3. Inona avy ireo karazana fonosana azonao omena?
Crates na Pallet
4. Inona no fahafahanao mamokatra isam-bolana?
300TON / Volana
5. Iza no seranana akaiky indrindra?
Seranan-tsambo ranomasina Shanghai
6. Manaiky ny fizahana ataon'ny antoko fahatelo ve ianao?
Azafady mba alefaso aminay ny hafatrao raha misy fanontaniana na fanontanianao, dia hamaly anao izahay ao anatin'ny 12 ora!
Teo aloha: Flange misy kofehy
Manaraka: Flange jamba